Weydii khariidadaha isku dhiibaya Microsoft - Geofumadas
Weydii khariidadaha gudbinta ee Microsoft
Luulyo, 2008 Google Earth / Maps, dalwaddii Earth
In yar ka hor waxaan ka hadlaynay lix beddelaadyo kala duwan adeegyada khariidaynta khadka tooska ah; maxaa yeelay waa lagama maarmaan in la gooyo mid ka mid ah iyo midka kale si loogu geliyo khatarta baabi'inta.
Nabadgelyo Weydiista Khariidadaha
Weydiiso inuu goaansaday inuu dhiibo, hadda wuxuu ku tusayaa Virtual Earth boggeeda, taas oo aan loo maleynaynin in Microsoft ay sidoo kale go'aansatay inay iibsato shitty qeybta ugu yar ee mashiinka raadinta ee aad lahaan karto maxaa yeelay baaritaanada Live.com, xiriirada Su'aasha ayaa lagu muujiyay.
Xusuusnow in maalmo ka hor Virtual Earth ay fursadda u furtay kuwa rumeysan inay leeyihiin wax muhiimad weyn leh si ay u bixiyaan macluumaadka, tani kama tagayso shirkadihii mar ahaan xoog badnaa, sida aan aragno inuu Ask.com sameynayo.
Sida laga soo xigtay mid ka mid ah wacdiyayaashiisa, helitaanka kalluunka noocan ah ee kalluunka yar waxaa ka mid noqon kara goobo ay ka mid yihiin YellowPages.com, Superpages.comiyo WhitePages.com; waxaa jira dad badan oo hal abuur leh sida Sawirka in halkan waxaad fursad fiican u leedahay inaad iibiso fikradahaaga ... ama xogta.
Ma wanaagsanaanta Khariidadaha Waddada Furan?
Barxadda kale ee halista ugu jirta baabi'intu waa Khariidadaha Furan ee Wadada; waa fikrad fiican in khariidado lagu dhiso qaab wiki ah. Dharbaaxada waxaa siisay Google markay bilaabeyso khariidad, si dadka isticmaala ay iskaga kaashadaan dhismaha khariidadaha sawirradooda. Iyo in kastoo dad badan ayaa sheeganaya Tan iyo markii la qorsheynayay in la furaa Khariidadaha Wadada, Google waxay heshiis dhowr sano ah la gashay Tele Atlas si xogta khariidadeeyaha loogu daro halkaas.
OSM ma dhiman karo, laakiin waxay lahaan doontaa tartame la shaqeeya iskaa wax u qabsadayaal iyo hannaan ganacsi oo aasaasi ah.
Waqtiyadan aan qofna si bilaash ah ugu shaqeynaynin (muddo dheer), xumaanta is-kaashatada ayaa shaki galisay ujeeddooyinka wanaagsan ee dadaallada wiki. Sida saaxiib halkaa jooga uu yiri,
… Adeegsadayaashu way la shaqeyn karaan Google, waxay ku siin karaan bilaashkooda, iyagoo ka tanaasula xuquuqdooda oo dhan, si Google uu ugu gudbiyo Teleatlas iyo TomTom waxay kugu soo dallaci doonaan 180 euro oo ah cusboonaysiinta soo socota ee sawir gacmeedka GPS-ka gaarigaaga uu u baahan doono. sanadka soo socda.
Wanaag ama xun?
Kaliya ka fikir arrintan:
Khariidadaha Furan (Open Street) ayaa loo dhisay si wadashaqeyn leh, haddii aad xog ku soo ururiso GPS mitir sax ah oo hooseeya oo aad geliso, waxay ansaxinayaan ama diidi doonaan xogta ku saleysan xogtaada badan ... ugu yaraan qaab isbarbardhig ah Google waxay ku qiimeysaa xogtaada haddii ay la jaan qaadayaan sawirka iyaga, oo leh soddon iyo soddon mitir sax ah
Weydiintu waxay ku saabsaneyd kaabayaasha 'de'Carta', taas oo fikradaha dadka qaar qabaan xaalado fikir khariidad ahaaneed oo u guuraya kaabayaasha ku wajahan wax badan dhanka "web juquraafiyeedka"
Post Previous" Hore Maxaa Juun inaga tagay
Post Next Geo Summit Latin America 2008Next »
4 Jawaab ah "Weydii khariidadaha isu dhiibaya Microsoft"
Weydiimo, waa wax la yaab leh in la arko halkan
Manuel Medina isagu wuxuu leeyahay:
The neophytes laakiin taageerayaasha mawduucyada ayaa qadarinaya ficilada la wadaagayo natiijooyinka mid kasta
Khatarta baabi'inta waxay u egtahay mid xoogan, laakiin dadaal badan oo firfircooni wadareed ayaa leh dhibaatooyin waqtiga si ay naftooda u joogteeyaan ... haddii aysan jirin ganacsi ku lug leh.
Si lama filaan ah uma dhicin sidan oo kale, laakiin waxaan mar horeba u aragnay kiisas khiyaano ah sida Mysql, oo aynu wada shaqeynay, SUN waxay soo iibsadeen trillion.
Dhinaca kale, ww3.org waxay isku deyeysaa inay ku jirto meel aan la aqoonsan iyo samafal.
Gari isagu wuxuu leeyahay:
Waxay iila muuqataa aniga oo ah muraayad ah in OSM ay halis ugu jirto inay burburiso. Si hubaal ah u aragto shuruudaha ruqsadda Google waxay siineysaa rabitaan dheeraad ah oo wax ku biiriya OSM. Sidaa daraadeed, Wikipedia miyuu dhaawac u geystey sababo kale oo loo yaqaan 'encyclopedia'?